Isiqeshana Sepipe Clip Sentwasahlobo - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 19 ye-Isiqeshana Sepipe Clip Sentwasahlobo)
I-Universal roundable Tube Clamp Incazelo Yomkhiqizo I-aluminium clamp evundlile evamile ukuyisebenzisa ku-octagonal carbon fiber tube.Yizingxenye ezimbili ezihlukene futhi idinga isikulufa ukuyifaka. Sinezintambo ezivundlile ze-aluminium kanye ne-roll aluminium clamp . Imininingwane: Umbala: omnyama / obondayo...
Isiqeshana seCarbon Fibre Tube Clamp Mount Clip
Isiqeshana seCarbon Fibre Tube Clamp Mount Clip Incazelo Yomkhiqizo I-aluminium clamp evundlile evamile ukuyisebenzisa ku-octagonal carbon fiber tube.Yizingxenye ezimbili ezihlukene futhi idinga isikulufa ukuyifaka. Sinezintambo ezivundlile ze-aluminium kanye ne-roll aluminium clamp . Imininingwane: Umbala: omnyama /...
I-aluminium clamp clip multipulter tube Incazelo Yomkhiqizo I-aluminium clamp evundlile evamile ukuyisebenzisa ku-octagonal carbon fiber tube.Yizingxenye ezimbili ezihlukene futhi idinga isikulufa ukuyifaka. Sinezintambo ezivundlile ze-aluminium kanye ne-roll aluminium clamp . Imininingwane: Umbala: omnyama / obondayo...
Isiqeshana se-Aluminium Clamp esiguqukayo se-Carbon tube
Isiqeshana se-Aluminium Clamp esiguqukayo se-Carbon tube IHobbycarbon ngumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machining, insizakalo yokusika i-carbon fiber CNC kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. Izingxenye ze-Aluminium ze-CNC inqubo yokukhiqiza efezwa ngokucindezela okukhulu...
Octagonal Pipe Clamp Alignment Spring Isiqeshana
I-Octagonal Tube Clamp Clip Mount Movable Clamp
I-Octagonal Tube Clamp Clip Mount Movable Clamp Incazelo Yomkhiqizo I-Octagonal carbon fiber tube clamp isetshenziswa kabanzi emkhakheni we-drone.Nxa inenzuzo elula yesisindo, amakhasimende amaningi ajabule ngezinto ze-aluminium. Ubulukhuni be-aluminium engu-6061 banele.Certianly, uma udinga i-super hard, mhlawumbe...
Isiqeshana se-aluminium se-CNC se-20mm 25mm 30mm tube
Isiqeshana se-aluminium se-CNC se-20mm 25mm 30mm tube I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machined, se-carbon fiber CNC yokusika insiza kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. Izingxenye ze-Aluminium ze-CNC inqubo yokukhiqiza efezwa ngokucindezela okukhulu noma...
I-30mm OD Aluminium Tube Clamp yeMultipter / Isiqeshana
I-30mm OD Aluminium Tube Clamp yeMultipter / Isiqeshana I-12mm-30mm yangaphakathi ye-aluminium carbon fiber tube clamp clamp, ukubukeka kwe-cnc machining ukubukeka okuhle, ukwelashwa komhlaba. Izinga eliphakeme lekhwalithi ephezulu ye-aluminium multi-axis universal, isebenzisa indiza ye-aluminium yendiza, ukukhanya...
I-Dia Black Aluminium Clamp Clip yeRC Multirotor
I-Dia Black Aluminium Clamp Clip yeRC Multirotor I-12mm-30mm yangaphakathi ye-aluminium carbon fiber tube clamp clamp, ukubukeka kwe-cnc machining ukubukeka okuhle, ukwelashwa komhlaba. Izinga eliphakeme lekhwalithi ephezulu ye-aluminium multi-axis universal, isebenzisa indiza ye-aluminium yendiza, ukukhanya...
I-Tube Clip ye-Multipter Tartor 12mm Carbon tube
I-Tube Clip ye-Multipter Tartor 12mm Carbon tube I-12mm-30mm yangaphakathi ye-aluminium carbon fiber tube clamp clamp, ukubukeka kwe-cnc machining ukubukeka okuhle, ukwelashwa komhlaba. Izinga eliphakeme lekhwalithi ephezulu ye-aluminium multi-axis universal, isebenzisa indiza ye-aluminium yendiza, ukukhanya...
Isiqeshana / Isiqeshana esingu-16mm we-Aluminium Tube
Isihambisi se-aluminium / isiqeshana se-aluminium eshukumayo esingu-16mm se-Carbon Fiber Tube Clamp yeRC Hobby Incazelo Yomkhiqizo 12mm-30mm wangaphakathi wepayipi ungqimba wepayipi, ukubukeka kwe-cnc machining ukubukeka okukhangayo, ukwelashwa komhlaba ongaphezulu. Izinga eliphakeme lekhwalithi ephezulu ye-aluminium...
Movamp Aluminium Round Tube Clamp / Isiqeshana
Amandla Wokunikezela: 10000pair
Isiqeshana Sepipe Clip Sentwasahlobo Isiqeshana sePipe Clip Sentwasahlobo Izithonjana Zentwasahlobo Isiqeshana Sebhasikidi Seat Post Isiqeshana Esiphelele Se-Carbon Fibb Tube Isiqeshana seCarbon Tube Isiqeshana Se-Round Carbon Fibre Washer wasentwasahlobo
Isiqeshana Sepipe Clip Sentwasahlobo Isiqeshana sePipe Clip Sentwasahlobo Izithonjana Zentwasahlobo Isiqeshana Sebhasikidi Seat Post Isiqeshana Esiphelele Se-Carbon Fibb Tube